လူသိနည်းလှတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်နေသဘောထားအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ K ညီ – Shwe Yaung Lan
HomeCelebrityလူသိနည်းလှတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်နေသဘောထားအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ K ညီ
လူသိနည်းလှတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်နေသဘောထားအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ယုန်လေးနဲ့ K ညီ
December 21, 2020 Writer Magic Celebrity 0
ယနေ့မှာတော့ ယုန်လေးနဲ့ K ညီတို့က သူတို့သိသမျှမြင့်မြတ်ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြကာပြန်လည်ဖြေရှင်းလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ယုန်လေးက ”ဘယ်သူ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူကူညီတယ် .စက်အဖွဲ့ က အရမ်းရင်းတဲ့ လူတွေရော၊မရင်းတဲ့ လူတွေ ရော ဆေးရုံတက်တာတို့ .တစ်ခုခု အဆင်မပြေဖြစ်တာတို့ သူကူတယ် .လူတိုင်း ကို အမြင်မတော်ရင် ကူညီနေတဲ့ မြင့်မြတ် သူအဖေ အမေ အရင်းကို ဘာမှ မလုပ်ပေးဖူးကျေးဇူး မသိဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား.သေချာစဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ဝေဖန်တာ မစောစေချင်ပါဘူး ။တစ်လောက လုံးလည်း သူ့စိတ်ထား သူ့စိတ်ဓာတ်သိပါတယ် . ချက်ချင်း ဘယ်သူမှ ဝင်မပြောကြတာ . မိသားစုရေးဖြစ်နေလို့ပါ .ကျွန်တော် တိတိကျကျ သိတာ .
ကျွန်တော်နဲ့ တွဲပြီးကူတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် .မပြောတော့ဘူး . အနီးစပ်ဆုံး Covid First waveက ပြောမယ်ဆို PPE အစုံ1040 သိန်း ၁၆၅ သိန်း ကျော်ဖိုးလှူတယ်။ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ အတွက် ၁၀သိန်း ကျွန်တော့်အလှူမှာ ထပ်မတည်တယ်။မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဆန်၊ဆီ၊ဆား လိုအပ်တာ လှူတယ်.ရုပ်ရှင်လောက သားများ အဆင်မပြောဘူးဆိုလည်း သူကူပါတယ်။မြင့်မြတ်က Fb မသုံးဘူး၊ပြီးတော့ သူ့အဖေကို ဘယ်အိမ်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်၊အမေကို ဘယ်ကွန်ဒို ဝယ်ပေးလိုက်တယ်၊ညီမလေးတွေကို ဘာ ဆိုင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်၊သူလူသိအောင် မပြောပြခဲ့ဖူးလေ၊အဲ့လိုပြောလို့ အဖေ အမေကို အိမ်ဝယ်ပေးပြီး Fb ပေါ်ပီတိ အဖြစ်နဲ့ တင်တဲ့ သူများကိုလည်း စော်ကားခြင်း မဟုတ်ပါ၊ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး အဲ့လိုPost တိုင်းကိုကြည်နူးမိပါတယ်။”
Excel မှာ အခန်းဝယ်ပေးတယ်၊ရွှေဂုံတိုင်မှာ ကွန်ဒိုဝယ်ပေးတယ်၊ဦးအတွက် Crown ဝယ်ပေးတယ်၊ညီမလေးတွေ အတွက် လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်လေးတွေသူလုပ်ပေးတယ်။ ရင်းနှီးပေးတယ်။လတိုင်း မိသားစုကို ကန်တော့တာ စိတ်ထဲက မှန်းကြည့်ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲ မှန်းကြည့်တာ ထက် ၃ ဆလောက်များပါတယ်။လူတိုင်း မှာ အခက်အခဲ နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရသလို Covid အချိန်ကာလမှာ သူလည်း အခက်ခဲပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ များစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင်ရ့်င် Live မလွှင့် Fb မသုံးတဲ့လူ စိတ်ထွက်ပေါက် အနေနဲ့ သူသီချင်းတွေ အော်ဆိုတယ် ၊ကပြတယ်၊အလွတ်ပျော်ပျော်နေတယ် ပရိတ်သတ်လည်း ပျော်တယ် သူလည်းပျော်တယ် Live မှာ တွေ့ရတာလည်း ဒါသူ့ဘဝ ပုံစံပဲ။အထာမရှိဘူး ပေါ့ပါးတယ်။အနုပညာအရည်ချင်း ခမ်းနားတယ် နေတာထိုင်တာ မခမ်းနားဘူး။
ညှပ်ဖိနပ် နဲ့ ဘောင်းဘီတိုပဲ ဒါပဲလေ၊သူ့ဆီမှာလည်း စိတ်ရူပ်စရာတွေ အရမ်းများပါတယ်။သူလူတိုင်းကို မပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောလည်း စိတ်ညစ်တာပဲ ရှိမှာပါဆိုပြီး သူပြောနေကျစကား (အချိန်တန်ရင် သူဟာသူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်)ပြောပြီး အမြဲတမ်းရယ်၊အဲ့ဒါကြောင့် သူဖုန်းပိတ်ထားတာများပါတယ်၊ဘယ်မှလည်း မသွားဘူး။ အိမ်မှာပဲ ရှိပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ တွေ့ချင်လည်း အိမ်ပဲသွားတာ အရေးကြီးတဲ့ အချိန် ဆက်မယ်ဆိုလည်းဘယ်သူဆက်ဆက် Manager နဲ့ သူ့ဘေးနားရှိတဲ့ ညီလေးဆီဆက်ရင် မြင့်မြတ်ကိုယ်တိုင် မကိုင်တာမှ မရှိတာ”
ဦး Taxi မောင်းတာလည်း ကားဝယ်ကတည်းက နံပါတ် အနီဝယ်တာ အလုပ်မရှိရင် ပျင်းလို့ ဒီတိုင်းမောင်းနေတာ ကျွန်တော့်ကို ဦးကိုယ်တိုင်ပြောဖူးပါတယ်။မိသားစုတွေ နားလည်မူ့ခဏလွဲတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာလေး တစ်ခုကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်Media ကို သွားမဖြေရှင်းဖို့ပါပဲ။မြင့်မြတ် အဖေ ကို အကူညီတောင်းခံတဲ့ လူအသွင်ဖြစ်အောင် နောက်ခံတီးလုံးတွေ Edit တွေနဲ့ Drama ခင်းထားတော့ မြင့်မြတ်ကိုပိုပြီး အထင်ဝိုင်းစောင်းကြတဲ့ အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။(အကူညီတောင်းခံတဲ့ လူတန်းစားများကိုလည်း စော်ကားချင်းမဟုတ်ပါ)
ထင်ရာတွေ လျှောက်ဝေဖန်နေတဲ့ လူများကိုတော့ ထင်သလို မဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲ အတိကျပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ကိစ္စမှ မပါတော့တာကြာပါပြီ မြင့်မြတ်ကိစ္စကတော့ ဘာဖြစ်နေနေ ကျွန်တော်တို့ သူ့ဘက်က အပြည့်ဝ ရပ်တည်ပြီးသားပါ တကယ်လည်း ကျွန်တော် ပြောတာတွေ အမှန်တရားတွေကြီးပါပဲ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြင့်မြတ်က နာမည်နဲ့လိုက်အောင် မြင့်မြတ်ပါတယ် အားလုံး Peace”ဆိုပြီး အရှိအတိုင်းကို ရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
သရုပ်ဆောင် K ညီကလဲ အထင်လွဲခံနေရတဲ့ သူငယ်ချင်း မြင့်မြတ်ဘက်ကနေ ဝန်းရံပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ K ညီ က “သူ့ စိတ်သဘောထားကောင်းတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်အပါအဝင်အနုပညာလောကသားအားလုံး သူ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကို သိကြပါတယ် အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ် သေသေချာချာအဖြစ်မှန်ကိုမသိပဲ အထင်မလွဲကြပါနဲ့ခမျာ🙏✌️ Peace” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိတတ်ကြီးလဲ မြင့်မြတ်ရဲ့ အကြောင်းကို သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မိဘတွေအပေါ်သိတတ်လိမ္မာလွန်းတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမြင့်မြတ်ရဲ့အကြောင်းစုံကိုဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဂျူးဂျူးပန်ထွာ
မြင့်မြတ်ကို ဝေဖန်နေသူတွေကို “မြင့်မြတ်ကိုမထိနဲ့ “လို့ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးလာခဲ့တဲ့ဇော်ဇော်အောင်